Raw Methenolone vovoka acétate mpamokatra sy mpamatsy - orinasa
Ny steroitrano metenolônina dia steroid anabolic amabolic izay ampiasain'ny bodybuilders hampirisika ny fihenan'ny vozona henjana; misoroka ny alaola ary manatsara ny fahatsarana sy tanjaka ara-batana.
Vovon-ketsa vita amin'ny Methenolone Acetate (434-05-9)
Vovon-ketsa vita amin'ny methénolone akondro (434-05-9) Description
Ny vovon-ketsa vita amin'ny Methenolone Acetate, fantatra amin'ny anarana hoe primobolan, dia steroid anabolic androgenic izay avy amin'ny dihydrotestosterone ary matetika no hita ho steroidal am-bava fa tsy fitaovana, miaraka amin'ny toetra malemy androgenic. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretin'ny taolana sy ny tsy fahampian-tsakafo izy io, Ny taha-pahavoazana avo lenta kokoa sy ny toaka malemy dia ambany raha oharina amin'ny analoga 17 ana-alkylated. Ny acetenate Metenolone dia nampidirina ho ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny 1961. Na izany aza, dia matetika no iharan'ny fanararaotana amin'ny fanatanjahan-tena izy noho ny fahafaha-mampitombo ny herin'ny tebiteby, ary koa ny fampiroboroboana ny fahombiazany sy ny herisetra. Izy io dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny hazakazaka.
Vovon-ketsa vita amin'ny methénolone (434-05-9) Specifications
Product Name Vovon-ketsa vita amin'ny methénolone
Anarana simika NSC-74226; SH-567; Sq-16496; premobolan
molekiolan'ny Wvalo 344.49
mitsonika Point 138-139 °
Storage Temperature amin'ny -20 ° C
Application Amin'ny maha steroid anabolic
Inona no atao hoe vovon-ketsa vita amin'ny methénolone (434-05-9)?
Ny vovon-ketsa vita amin'ny Methenolone Acetate, fantatra amin'ny anarana hoe primobolan, dia steroid anabolic androgenic izay avy amin'ny dihydrotestosterone ary matetika no hita ho steroidal am-bava fa tsy fitaovana, miaraka amin'ny toetra malemy androgenic. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretin'ny taolana sy ny tsy fahampian-tsakafo izany, fa aleo mihinana ny vokatra azo avy amin'ny fahasalamana sy ny toaka fisakafoana ambany kokoa raha oharina amin'ny analoga 17 ana-alkylated. Ny acetenate Metenolone dia nampidirina ho ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny 1961. Na izany aza, dia matetika izy io no ampiasaina amin'ny fanatanjahan-tena noho ny fahafaha-mampitombo ny herin'ny tebiteby, ary koa ny fampiroboroboana ny fahombiazana sy ny herisetra.
Ahoana ny vovoantim-panafody mena menaenolone (434-05-9) asa
Ny Methenolone dia endriky ny DHT (na ho marim-pototra kokoa - dia endrika miovaova amin'ny endriky ny DHT). Izy io dia mirakitra fifandraisana roa miaraka amin'ny karbaona iray sy roa, izay manampy amin'ny fampitomboana ny anabolika an'io hormonina io. Izy io koa dia mitondra vondrona 1-methyl fanampiny izay miaro azy amin'ny fisarahana. Ny fisian'ny ety ety ety kokoa dia miaro azy io amin'ny fatran'ny metabolism.
Vovon-ketsa vita amin'ny methénolone (434-05-9) Dosage
Oral Primobolan (Methenolone Acetate): Ireo mpampiasa voalohany Primobolan dia hahita ny andavanandro 50 - 100mg ho doka mahomby miaraka amin'ny oroka Primobolan. Ireo mpampiasa mpampiasa dia fantatra amin'ny fihazakazahan'ny vavony Primobolan amin'ny andavanandro 100 - 150mg miaraka amin'ny vokatra tsara, ary ireo mpampiasa misimisy dia hahita ny karazan'ny 150 - 200mg isan'andro ho tena mahomby. Ny volo vava amin'ny Primobolan dia iray amin'ireo steroide anabolic amabolic (ny iray hafa dia Andriol izay nalaina tamim-pahaizana Testosterone Undecanoate) izay tsy maneho ny hepatotoxicity. Noho izany, azo ampiasaina ny dipoavatra avo lenta ao Primobolan saingy tsy maintsy lazaina fa ny mena prôtôlolana dia mbola manana ny fepetra fanoherana ny metabolisma sy ny fihenan'ny aty, ka noho izany dia mety tsy hotsaroana tanteraka ny fisian'ny hepatotoxicity avy amin'ny Primo, indrindra fa Ny doka Primobolan ao amin'ny endriny am-bava dia mihamitombo hatrany amin'ny isa avo sy avo.
Ireo mpampiasa vehivavy mikasa ny hitarika ny fampisehoana sy ny fampivoarana ara-batana amin'ny mozika Primobolan dia hahita fampiononana sy tombontsoa amin'ny andron'ny 50 - 75mg isan'andro ary tsy dia atahorana firy ny virilization.
Kaomandy roatan-ketsa menaenolone (434-05-9)
Ny Primobolan (acetate methenolone) dia iray amin'ireo steroids tsara indrindra eo amin'ny bodybuilders sy ny atleta noho ny tombontsoa mahagaga izay tokony ho faty. Izy io dia voafaritry ny maro ho toy ny fanafody tonga lafatra ho an'ny cyber steroid. Izany dia vahaolana tena tsara ho an'ny atleta sy bodybuilder rehetra izay tena mahatsapa na manahirana ny olana toy ny fahavoazan'ny aty, ny toaka, ary ny olana hafa amin'ny aretina hafa amin'ny fampiasana steroïde oral rehefa mitarika ny vokatra kely sy ny tombony tsy voatanisa izay misy;
Izany dia manampy amin'ny fampiakarana ny hery sy ny angovo - ny mpampiasa dia afaka miantehitra amin'io varo-boba io amin'ny fitomboan'ny tanjaka sy ny angovo mandritra ny vanim-potoana lehibe. Izany dia miasa amin'ny famelana ny fitazonana azota izay lafiny iray amin'ny famokarana angovo.
①Afaka amin'ny fanorenana hozatra - ity dia manampy amin'ny fitazonana azota ihany koa. Ny trano fanorenana dia miteraka azôty, ary amin'ny fanampiana amin'ny fitehirizana ny azota, ny fitsaboana dia miaina fepetra tsara hoenti-manavao ny hozatra vaovao ary mitazona ireo tranainy.
②Manipika ny mety hisian'ny toe-javatra mampihoron-koditra - ity steroid ity dia fantatra ho iray amin'ireo azo antoka indrindra amin'ny tsena ary tsy mila manahy intsony momba ny fanehoan-kevitra maneso.
③ Mampitombo ny taham-piterahana matavy izy io - izany no tanjon'izy ireo; manampy amin'ny famokarana. Izany dia manampy amin'ny fampihenana ny fatin'ny vatana manontolo izay manampy amin'ny fitomboan'ny taova ary mampitombo ny herin'ny mpampiasa.